Corona Archives - Sushil Silwal
Corona Health US Canada
अमेरिकी शीर्ष १००,००० मा कोरोनाभाइरसको मृत्यु
No Comments on अमेरिकी शीर्ष १००,००० मा कोरोनाभाइरसको मृत्यु
अमेरिकाले कोरोनाभाइरस प्रकोपमा चार महिना भन्दा कममा १,००,००० व्यक्तिको मृत्यु पार गरिसकेको छ।
यो कुनै पनि अन्य देश भन्दा बढी घातक देखिएको छ, जबकि यसको १.69 million मिलियन पुष्टि संक्रमण विश्वव्यापी कुल को about०% को लागी खाता।
बिहीबार, आंकडा पुगेको एक दिन पछि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गरे जसले यसलाई “दुखद माइलस्टोन” भने।
उनको प्रारम्भिक मौन आलोचकहरूले टिप्पणी गरे जसले श्री ट्रम्पले प्रायः टोललाई कम गर्न खोजेका थिए भनेर औंल्याए।
राष्ट्रपतिले कोविड १ from बाट मरेकाहरूको परिवार र साथीहरूप्रति पनि “सहानुभूति र प्रेम” व्यक्त गर्नुभयो।
पहिलो अमेरिकी संक्रमण वाशिंगटन राज्यमा जनवरी २१ मा रिपोर्ट गरिएको थियो।
गत वर्ष चीनको वुहान शहरमा भाइरस देखा परे पछि विश्वव्यापी रूपमा .6..6 मिलियन मानिसहरूलाई स infected्क्रमित र 35 354,99। व्यक्तिको मृत्यु भएको रेकर्ड गरिएको छ।
अमेरिकाको मृत्युको स 100्ख्या १०,०२ stands। रहेको छ, मेरील्याण्डको जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीका अनुसार यो महामारी फैलिएको छ।
यसको मतलब कोरिया, भियतनाम, इराक र अफगानिस्तानका युरोपहरू मिलेर बनेको कोविड १ from बाट करिब अमेरिकीहरू मरे।
तर प्रति व्यक्तिको आधारमा अमेरिका मृत्युदरमा बेल्जियम, बेलायत, फ्रान्स र इटली जस्ता नौौं स्थानमा छ, विश्वविद्यालयले देखाएको छ।
अमेरिकाको महामारी कसरी बाँकी विश्वसँग तुलना गर्दछ
‘हामीले यसलाई बन्द गरेका छौं’ बाट १००,००० अमेरिकी मृत अवस्थामा
अमेरिकाको मृत्यु हुने संख्या अझै चढाईमा छ, र स्वास्थ्य अधिकारीहरु भन्छन् कि वास्तविक संख्या रेकर्ड गरिएको गन्ती भन्दा बढी छ।
राष्ट्रिय चित्र के हो?
बीट राज्यहरूले आइतबार समाप्त हुने हप्ताको लागि नयाँ घटनामा वृद्धि भएको रिपोर्ट गरेको एक रोयटर्स अध्ययनले जनाएको छ।
उत्तरी क्यारोलिना, विस्कॉन्सिन र अर्कान्सास ती मुद्दामा लगातार वृद्धि देख्नेहरू मध्येका हुन्।
शिकागो, लस एन्जलस र उपनगरीय वाशिंगटन डीसी लगायत धेरै महानगरीय क्षेत्रहरूमा केसलोड अटेको छ।
केहि कडा प्रभावित राज्यहरूले न्यूयोर्क सहित मृत्यु दरहरुमा गिरावट देख्न थालेका छन्, जहाँ २१,००० बासिन्दाहरूको मृत्यु भएको छ।
शहर मा संकट को चरम समयमा, दैनिक मृत्यु सयौं मा थियो। अस्पतालहरू असाध्यै छक्क परे र अस्थायी मोर्गेहरू स्वास्थ्य सुविधाहरू बाहिर बनाइए।
राजनीतिक प्रतिक्रिया कस्तो भएको छ?
राष्ट्रपति ट्रम्पले जोड दिएका छन कि उनको प्रशासनको कार्यबिना मृत्युको स 25्ख्या २ higher गुणा बढी हुन सक्छ, यद्यपि आलोचकहरूले उनीलाई ढिलो प्रतिक्रिया दिएको आरोप लगाएका छन।
राज्य गभर्नरहरु पनि नर्सि homes घरहरु मा भाइरस को लागी जो घातक खतरा चाँडै पर्याप्त बुझ्न असफल लागि दोषी छन्।
सुरुमा रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले महामारीलाई तल झार्यो र यो alतु फ्लूसँग तुलना गरे। फेब्रुअरीमा उनले भनेका थिए कि अमेरिकामा भाइरस “नियन्त्रणमा” थियो र अप्रिलमा यो “चमत्कारी ढंगले टाढा जान सक्छ”।
उनले 50०,०००-60०,००० को मृत्यु हुने भविष्यवाणी गरे, तब 60०,०००-70०,००० र त्यसपछि “ठ्याक्कै १०,००,००० मुनि”।
श्री ट्रम्पले यो महिना यो सम्मानको ब्याज हो भन्ने तर्क गरे कि अमेरिका विश्वमा सब भन्दा बढी संख्यामा संक्रमित संक्रमण हो “किनकि यसको अर्थ हाम्रो परीक्षण अझ राम्रो छ”।
न्यु योर्कको कोलम्बिया युनिभर्सिटीले गरेको अध्ययनले देखायो कि यदि अमेरिकाले चाँडै काम गरेको भए लगभग about 36,००० मानिस मर्ने थिए।
नोभेम्बरको ह्वाइट हाउसको चुनावमा श्री ट्रम्पको सम्भावित प्रजातान्त्रिक चुनौतीकर्ता जो बिडेनले बुधवार शोक सन्तप्त परिवारलाई एउटा सन्देश पठाए।
“ती व्यक्तिलाई चोट पुर्याउनेहरुलाई तपाईको घाटा भएकोमा म दु: खी छु,” पूर्व उप राष्ट्रपतिले ट्वीटमा भने। “राष्ट्र तपाईसँग शोक गर्दछ।”
कुरा अमेरिकाले सही पायो – र गलत भयो
उनले ट्रम्प प्रशासनको स of्कट समाधान गर्ने आलोचना गरे। “यो नराम्रो माइलस्टोन हो जुन हामी पुग्न सकेनौं; यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो,” उनले भने।
लकडाउन कसरी सजिलो छ?
महामारीको क्रममा करीव million million करोड अमेरिकीहरू काम नगरी अमेरिकाले कोरोनाभाइरसबाट जमेको अर्थव्यवस्था फेरि खोलेर संयुक्त राज्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ।
सबै states० राज्यले कोभिड १ rules नियमहरू कुनै न कुनै रूपमा सहज बनाउन सुरु गर्यो।
फ्लोरिडामा विश्वको सबैभन्दा ठूलो थिम पार्क वाल्ट डिस्ने वर्ल्डले राज्यका गभर्नरले अनुमति दिएमा ११ जुलाईदेखि खोल्ने योजना छ।
एमजीएम रिसोर्ट्सको स्वामित्वमा रहेका चार लास भेगास क्यासिनोहरू पनि4जुलाईमा पुनः खोल्ने कार्यक्रम छन। कम्पनीले कर्मचारीहरु नियमित रूपमा कोविड – १ for को लागि परीक्षण गरिने छ भन्छ।
हाल, कोभिड १। को लागी कुनै भ्याक्सिन छैन। यस रोगको लागि कुनै पक्का उपचार पनि छैन, तर त्यहाँ धेरै परीक्षण गरिएको छ।
यस महिनामा गरिएको एपी-एनओआरसी सर्वेक्षण अनुसार Americans%% अमेरिकीहरूले भने यदि तिनीहरू उपलब्ध भएमा उनीहरूलाई कोरोनाभाइरस खोप दिइनेछ।
विश्वव्यापी तस्वीर के हो?
ब्राजिलले पछिल्लो २ hours घण्टामा १,०86 new नयाँ मृत्युको रिपोर्ट गरेको छ, जसमा समग्र मृत्यु हुनेहरूको संख्या २,,, 8 to मा पुगेको छ। देश मा अब 411,821 पुष्टि मामलाहरु, संयुक्त राज्य अमेरिका पछि दोस्रो हो
अष्ट्रेलियामा, नेशनल रग्बी लीग प्रतियोगिता बिहीबार फेरि शुरू हुँदैछ – तर खेलाडीहरू र अधिकारीहरूमा कडा प्रतिबन्ध लगाइनेछ।
दक्षिण कोरियामा, करीव २4 लाख विद्यार्थीहरू नयाँ दैनिक घटनाहरूमा सानो वृद्धि भए पनि बुधवार स्कूलमा फर्के
EU को कार्यकारी आयोगले € 750bn (£ 670bn; $ 825bn) को पुन: प्राप्ति कोष प्रस्ताव गरेको थियो। अनुदान र loansण सदस्य राष्ट्रहरुमा वितरित गरिनेछ
बेलायतमा अधिकारीहरूले ठूलो परीक्षण र ट्रेस प्रणालीको घोषणा गरे जसको उद्देश्य संक्रमितहरूसँग नजिकको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूलाई भेट्टाउनु हो
साइप्रसले भूमध्यसागरीय टापुको यात्रा गरेपछि भाइरसको लागि सकारात्मक परीक्षण गर्ने कसैको छुट्टी खर्चहरू कभर गर्ने वाचा गरे
इक्वेडरमा, कोरोनाभाइरस परीक्षण किटको अत्यधिक मूल्य निर्धारण गरेको आरोपमा पुलिसले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रीको घरमा छापा मारे।
स्रोत : https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52821090